I-recipe yama-Magic yokuhlanza isikhumba
Abesifazane abaningi banganaki esinye sezigaba zokuhlanzwa: umuntu ovele nje ageze ngamanzi aphuzayo, abanye, ngokuphambene nalokho, abakwazi ukuma ukuhlanza, bekhetha ukwakheka kwezimonyo kuphela. Konke akulungile. Ukuhlanza kufanele kube nezinyathelo ezintathu, - i-cosmetologists iyaqiniseka. Abesifazane baseJapane babhekene nenkinga yemibimbi iminyaka engaba ngu-60. Ngaphambi kwalokho, iminyaka yabo inganqunywa kuphela ngamapulangwe e-nasolabial. Futhi lokhu kungakhathaliseki ukuthi baphendukela ekunakekelweni kochwepheshe kangako kaningi kunezontanga zabo ezivela eYurophu naseMelika. Imfihlo yobusha ikulungele ukuhlanzwa, okuyinto amaJapane enza umkhuba wangempela.
Le nqubo ihlala okungenani imizuzu engu-20 (ngokusho kwezibalo, abaseMelika abachitha isikhathi esingaphezu kwemizuzu engu-2-3 emakhambi wokwenza, kanye namaRussia - imizuzu engu-4-6) futhi iqukethe izigaba ezintathu noma ngaphezulu. I-Cosmetologists inomlutha wokusekela amaJapane, eqinisekisa ukuthi ukuhlanzwa ngokugcwele yisinyathelo sokuqala emzabalazweni wobusha nokukhanya kwesikhumba. Iresiphi yemilingo yokuhlanza isikhumba umqondo wayo!
Lokhu kukhishwa kwansuku zonke kusihlwa kwe-makeup, kuxubene nemfihlakalo yezinhlayiya ze-sebaceous nezithukuthuku. Ubisi lwezinyosi kuhloswe ekuhlanzeni isikhumba esomile ngesikhumba esiqinile se-lipid kanye nesikhumba esikhulile. I-Cream iklanyelwe isikhumba esomile nakakhulu ngokuvinjelwa kwe-lipid, ngokuhlunga nokuqina. Ijeli libhekiswe kubanikazi bekhanda lamafutha. Liquid ukususa ukwakheka (empeleni - kuhlanjululwe ngamanzi gel) - esikhumbeni esivamile, esomile nesibucayi kanye namajwabu amehlo. Amafutha asetshenziselwa ukwakheka kweso futhi afanelana nesikhumba esicasuliwe kakhulu. Inqubo yokwakheka kufanele iyenziwe nsuku zonke, ngokushesha ngemva kokuzizwa ungakhululekile ebusweni kusukela ekwenzeni.
Kususa izinsalela zokwenza kanye nezimonyo. Ama-dermatologists agcizelela kule nqubo. Yishintshe ekunakekeleni izimonyo, ngisho noma ujwayele ukusebenzisa ukhilimu kuphela emva kobisi. Insipho yotshwala - isikhumba se-porous oily, esivame ukuqhuma okuhlukahlukene. I-gel ephuzizayo - kufanelekile kuzo zonke izinhlobo zesikhumba. I-foam noma i-mousse iyinhlobonhlobo yikhiqiza eningi kakhulu: ayibangeli ukucasuka, ayimise isikhumba futhi ifanele ukusetshenziswa ngemuva kwezinqubo ezihlukahlukene zokuzicabangela zobuchwepheshe. Isibonelo, emva kokucubungula nokukhipha laser. Ngemuva kokugeza, qiniseka ukuthi usula isikhumba nge-tonic: ibuyisela isikhumba pH futhi isebenza njengesiqondiso "semikhiqizo yokunakekela elandelayo."
I-Cosmetologists ngisho ne-pimple yodwa ayincoma ukuba ihlehlise yodwa. Yini esingayisho mayelana nenqubo enjengoba ukuhlanza kungenziwa ngendlela engalungile, kungabangela ukuhlukunyezwa kesikhumba nokusabalalisa kwezibhamu ezivele zikhona. Ikakhulukazi ekhaya kuphela indlela engcolile kakhulu etholakala kithi - ukuhlanza ngesandla.
Ngisho ukhilimu obizayo kakhulu ngeke kukulondoloze emanzini nangendwangu ebomvu, uma ungagcini njalo isikhumba sakho. Qala inqubo yokuhlanza ngezinga eliphansi, kusho ukuthobeka. Khulisa kancane kancane "ukuqina" kwayo, eholwa ukusabela kwesikhumba enkambisweni. Izihlahla - ngenxa yesikhumba samafutha, isikhumba, hhayi kaningi ngaphezu kwesonto ngesonto. Njengemithi evuthayo basebenzisa i-polystyrene, i-polyethylene noma amathambo ezithelo ezichotshoziwe. Ukuhlunga ngokuphambene ne-polyethylene noma i-polystyrene. Izigameko zibuthakathaka futhi zilula, zifaka amafutha enhla yemvelo. Faka isicelo sokulimaza ngamagundane eminwe bese uhlunga ngobumnene isikhumba ngesibhamu noma isiponji. Umphumela waloluhlobo lwe-exfoliation akuwona ophansi ukusikhipha, kepha ngisho nesikhumba esincane noma esibucayi ngeke sikalimale futhi asivuli. Ukuphefumula nge-enzyme - indlela elula kakhulu futhi engafaneleki yokuhlanzwa. Njengomthetho, ukwakhiwa kwemikhiqizo ye-enzyme kuhlanganisa ukukhipha izitshalo zemvelo kanye nama-antioxidants.
Ukunakekela ekhaya izindebe
Indlela yokukhetha ukwelashwa kwemibono ezungeze amehlo
Amanzi okugezela ebusweni
Ukubuyisela Amafutha Obalulekile
Imithi yendabuko: ukunakekelwa kweshiya
Ama-pancake we-Banana nge-cardamom
Amakhekhe nge-chocolate ne-meringue
Ukudla ngesikhathi sokukhulelwa
Amapancake nge-ithanga, i-bacon kanye noshizi wezimbuzi
Ukupheka kwe-Shampoo, ngezinhlobo ezahlukene zezinwele ekhaya
Izitsha zegazi ezibomvu emehlweni
I-chicken fillet ku-multivariate
Ukuvimbela izifo zesigcawu somathumbu
Bath treatment zokwelapha nobuhle
Indlela yokuvikela ingane ekulimazeni ngengozi?